လငျးပိုငျလေးတှသေေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လငျးပိုငျလေးတှသေေ
Posted by Mon Lay on Jul 31, 2020 in Copy/Paste |0comments
ဒီ Post ကိုရှယျတာ၊ ပွနျကူးတငျတာမြိုးနဲ့ ကူညီကွပါဦး။
(၆)လအတှငျး သတော (၆)ကောငျတောငျရှိပွီ။ခုရကျပိုငျးအတှငျး သတော (၂)ကောငျ။ ရှော့တိုကျငါးဖမျးကွလို့ လငျးပိုငျတှပေါ သကေုနျတာတဲ့
ပုံမှနျအခြိနျဆို ဖမျးကွတယျ၊ ကငျးလှညျ့တယျ။ ခုကကြ ကငျးမလှညျ့တဲ့ အခြိနျကိုစောငျ့ကွညျ့ပွီး ရှော့တိုကျကွတာတဲ့။ သကေုနျတာပဲ …
လငျးပိုငျးလေးတှကေ မြိုးပှါးဖို့လဲ ခကျတယျ။ ကွာလဲကွာတယျ။ ကွီးလာဖို့လဲ စောငျ့ရတယျ။ အခုကြ ကလေး (၂)ကောငျနဲ့ အကွီး (၄)ကောငျတောငျ သကေုနျပွီ။ ခပျကွမျးကွမျးပွောရရငျတော့ #အသတျခံရတာပေါ့။ ပိုဆိုးတာက သကေုနျတာက #အမလေးတှေ ခညြျးပဲတဲ့။ မြိုးဆကျပှါးဖို့ ပိုခကျသှားတာပေါ့
ဧရာဝတီလငျးပိုငျဆိုတာ ရှားပါးရခြေိုလငျးပိုငျအမြိုးအစားပါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ (၇၆)ကောငျပဲရှိတော့တယျ။ အခု (၆)ကောငျတောငျသဆေိုတော့ (၇၀)ပဲကနြျမယျ။ ဒါတောငျ မိုးတှငျးရကွေီးလို့ ရစေီးနဲ့ မြှောပါသှားတာ၊ ပွနျရှာမရတာတှလေညျး ရှိဦးမှာ။ ဒီကွားထဲ ရှော့တိုကျငါးဖမျးကွတော့ ပိုဆိုး။ အဖတျဆယျမရ ဖွဈမှာပဲ ကွောကျတယျ။
ရှော့တိုကျငါးဖမျးတဲ့ တံငါသညျမှမဟုတျ၊ ရှော့တိုကျဖို့ လြှပျစဈဝါယာကွိုးရောငျးတဲ့သူတှကေိုလညျး သခြောကိုငျတှယျရမယျ ထငျတာပါပဲ ….
ကိုဗဈမဖွဈခငျကတော့ ဧညျ့သညျတှလော။ လငျးပိုငျကွညျ့ကွ။ လှတှေသေုံးကွနဲ့ဆိုတော့ အလုပျဖွဈတယျနဲ့တူပါရဲ့။ ခုကြ ငါးရှာဖို့ မွနျမာ့ရှားပါးလငျးပိုငျတှေ မြိုးတုနျးတော့ မလိုဖွဈကုနျပွီ ….
တံငါးသညျတှနေဲ့ ငါးအတူတူဖမျးပေးတဲ့ ဖိုးပွုံးခြိုလေးတှေ
တဈမ်ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ကုလသမ်မဂက အစ၊ WWF, WCF, Green Peace နဲ့ NGO တှအေဆုံး ထိနျးသိမျးဖို့ အားပေးကွတဲ့ ရှားပါးမြိုးစိတျ
အဲ့လို ကမ်ဘာမှာရော၊ မွနျမာမှာရော အငျမတနျရှားပါးတဲ့ လငျးပိုငျလေးတှေ မြိုးမတုံးဖို့ ဝိုငျးကူညီပေးကွပါ။ ဒီထကျထိရောကျတဲ့ စညျးကမျးမြိုးနဲ့ စောငျ့လြှောကျနိုငျအောငျ #သကျဆိုငျရာတာဝနျရှိသူမြားကို ဝိုငျးပွောပေးကွဖို့ အနောျက မတေ်တာရပျခံပါတယျ။
SaveIrrawaddyDolphin ဆိုပွီး ဒီ Post ကိုရှယျတာ၊ ပွနျကူးတငျတာမြိုးနဲ့ ကူညီကွဖို့ မတေ်တာရပျခံပါတယျ🙏🙏🙏
plz share ပေးကွပါ